Zvirongwa - Linux Vakapindwa muropa | Linux Vakapindwa muropa (Peji 4)
Kana iwe uchida Minecraft -style mitambo yemavhidhiyo, ine Vintage Nhau iwe unenge uine zita rekutamba kubva kune yako GNU / Linux distro uye ikozvino nekuvandudza
GTA: San Andreas iri kutakurwa neiyo Unity injini uye neLinux rutsigiro. Nhau huru, kunyangwe isiri yepamutemo vhezheni
Isu tinokuudza maitiro aunogadzira akadzika mavhidhiyo uchishandisa iyo DeepFaceLab chishandiso cheLinux, kuisirwa uye kushandisa neinokurumidza gwara
Kurarama pasina Netflix uye mamwe masevhisi ekushambadzira zviri nyore kwazvo. Isu tinokuudza kuti ndedzipi dzakavhurika sosi zvirongwa zvekushandisa kutsvaga dzimwe nzira
Firefox 69 inosvika ine anti-miner ichivharira, otomatiki zvemukati kutamba uye nezvimwe
Iyo nyowani vhezheni yeFirefox 69 vhezheni yakatangwa mune ipi yezvinhu zvitsva zvinounzwa mubazi idzva rebrowser, iwo modes ...
Duolingo seGNU / Linux app: dzidza Chirungu nenzira inonakidza
Duolingo yeLinux haina kutsigirwa zviri pamutemo neapp iyi, asi pane nzira yekushandura sevhisi kuita desktop desktop
Kusiya Chikepe mutambo wevhidhiyo uyo watove neyakavakirwa kuvaka inowanika kugoverwa kweGNU / Linux, yeLinux gamers kunakidzwa.
Waini 4.15 ndiyo vhezheni itsva mukuvandudza chirongwa cheWini. Iyo inouya nekunakidzwa kunatsiridzwa, kunyanya kumavhidhiyo mitambo
Bookworm muverengi we eBook wakavakirwa yekutanga OS inotaridzika kunge yakanaka. Inoenderana nezvimwe zvekuparadzirwa kweLinux.
Wasteland 3: nyowani-yekutamba vhidhiyo mutambo data
Wasteland 3 mutambo mutsva wevhidhiyo uyo unouya kune akati wandei mapuratifomu, senge Linux, uye iyo ine turera nyowani yekugadzira hype ...
SDLPoP: yakavhurika-sosi chiteshi chePrince wePersia inowanikwa seSnap
SDLPoP Muchinda wePersia chiteshi chinowanikwa cheWindows uye seSnap yeLinux. Tora rwendo kudzoka munguva neiyi nhoroondo mutambo.
Valve inoda kushandura Linux kuita benchmark yemitambo
Valve inoda kusimudzira mitambo paLinux, humbowo hweiyi ndiwo mapurojekiti ayo mazhinji ayo pamwe nezvido zvayo zvitsva ...
Areia: Nzira yekumambakwedza mutambo wevhidhiyo usingawanzoitika, uine chiitiko chinozorodza chinokunyudza munyika yekufungisisa, iine basa rakajeka remifananidzo
Usatarise Nzara Pamwechete, imwe yeiyo indie mitambo yemavhidhiyo yeLinux ine zvakavanzika, hunyanzvi mukugadzirwa, uye yakanaka yakajeka mifananidzo kumashure
Kukwira Kweindasitiri: 2130, zvitsva zvenguva yemberi zvemutambo wevhidhiyo
Kumuka kweindasitiri, kana iwe uchida ramangwana-rakavakirwa chivakwa uye manejimendi, iwe uri mune rombo rakanaka neiyo nyowani 2130 yezvinyorwa zveLinux
Project 5: Sightseer, RPG ine nyika yakavhurika pane Steam
Project 5: Sightseer, mutambo weRPG vhidhiyo inoenderana nenyika yakavhurika ine mikana yakawanda yaunogona. Inowanikwa kuLinux pane Steam
VICE, inonakidza Commodore 64/128 emulator yeLinux PC yako
Muchikamu chino isu tichataura nezve VICE, emulator iyo yatinogona kutora rwendo kudzoka munguva uye kushandisa Commodore 64 zvakare.
Iyo nyowani logo yeFirefox yasvika kubhurawuza, kunyanya muiyo Nightly vhezheni, uko kwainoonekwa nebhuruu panzvimbo yeorenji.
Kubvunzurudza mutambo wevhidhiyo unoshandisa imwe nharo ine nharo, asi inogona kuve nevateereri vayo. Uye zvakare, ichauya kuLinux
Steam Play, vhidhiyo mutambo wevatengi weLinux, yatove neiyo nyowani vhezheni kunze neProton 4.11-2 uye yakakosha kugadzirisa
Iwo akanakisa matipi uye manomano ayo mushandisi wese weFirefox anofanira kuziva
Muchikamu chino tinokuratidza matipi uye madanho ekuti ubudirire paunenge uchishandisa browser reFirefox.
Steam inotsvaga shanduko kuLinux kernel kugadzirisa vhidhiyo mutambo kuita
Valve, iyo kambani iri kumashure kweSteam, yakurudzira dzimwe shanduko dzinogona kuvandudza zvakanyanya ruzivo rwekutamba paLinux.
Maitiro ekuisa iyo Shutter Screenshot uye Markup Turu pane Ubuntu 19.04 Disco Dingo
Muchikamu chino tinotsanangura maitiro ekuisa Shutter muUbuntu 19.04 Disco Dingo kubva kune nyowani nyowani iyo yavakagonesa.
Valve inoenderera nekuvandudza Proton yeLinux yemitambo
Valve inoenderera mberi nekutsigira indasitiri yegamin paLinux, humbowo hweichi ndiko kuburitswa kutsva kwekuvandudzwa kweProton Project pane Steam Play.
Krita 4.2.4, ikozvino inowanikwa nyowani diki yekuvandudza inogadzirisa gumi nematanhatu bugs
Krita 4.2.4 yave kuwanikwa, vhezheni itsva iyo inogadzirisa madhiragi senge mamwe ane chekuita nefaira rekuchengetedza system.
Iyo nyowani vhezheni yeGoogle Chrome 76 inosvika uye idzi ndidzo nhau dzayo
Sechikamu chehurongwa hwekutanga kweGoogle Chrome, iyo vhezheni itsva 76 yasvika nenguva uyezve se ...
Latte Dock, yakanakisa doko rePlasma iri nani kunyange mushure mekuvandudzwa kwazvino
Latte Dock, doko rakagadzirirwa kushanda zvakakwana paPlasma, yakagadziridzwa uye ikozvino iri nani uye inogadziriswa.
Megaquarium: mutambo wevhidhiyo nezve park yemvura theme
Kana iwe uchida kuenzanisa uye manejimendi yemitambo yemavhidhiyo uye zvakare epaki epaki, senge emvura, iwe uchafarira Megaquarium
Google Stadia, iro rine simba rekutepfenyura vhidhiyo mutambo wevhisi ikozvino inozivisa zvimwe zvakavanzika nezve izvo iwe zvaunogona kuwana
Iyo inozivikanwa kambani IBM yakazivisa matatu akavhurwa sosi mapurojekiti ayo achasungirirwa kuKubernetes kwenzvimbo iri nani yekusimudzira
KDE Nharaunda yakaburitsa Krita 4.2.3, vhezheni inouya kugadzirisa bugs uye kuwedzera chinhu chitsva chichaita kuti zvinhu zvive nyore.
Kana iwe uine Android foni uye Mac, Nhau dzakanaka: KDE Unganidzo ikozvino inowirirana neMacOS. Muchikamu chino tinokuudza zvese zvaunoda kuti uzive.
Nzira yeTitans izita idzva rakaunganidzwa nevanhu paIndiegogo iwe yaungade kana uchida kupona uye dinosaurs
SoftMaker Hofisi uye FreeOffice, Microsoft Office clones, vanogashira akakosha matsva
Microsoft Office inobatanidza SoftMaker Hofisi uye FreeOffice, yakabhadharwa uye yemahara vhezheni, vakagamuchira makuru matsva.
Valve's Steam Play mutengi weGNU / Linux kugoverwa kunounza iwe Windows mavhidhiyo emitambo yeLinux nekuda kweProton uye nezvimwe zvakawanda
Valve inotangisa Steam Labs, nzvimbo yekuratidza miedzo mitsva
Chinhu chitsva kubva kuValve chinonzi Steam Labs, nzvimbo iyo icharatidza kuyedza kutsva kwemapurojekiti emangwana nezvimwe zvakawanda
Magirazi eValve chaiwo, iyo SteamVR, ikozvino ine Beta nyowani ine inonakidza yekuvandudza iyo inosvikawo kuLinux
Mozilla yakaburitsa Firefox 68, hombe vhezheni inouya iine mashoma anozivikanwa maficha. Muchikamu chino tinokuudza zvese zvaunoda kuti uzive.
Android Faira Kutamisa: yako «controller» pakati Android uye GNU / Linux
Android Faira Kutamisirwa chirongwa icho chinokubatsira iwe kuendesa mafaera pakati peavo madivayiri eApple nePC yako neGNU / Linux distro yako
Valve inogona kunge ichishanda pane nyowani vhezheni yeSteam Controller
Steam Controller inogona kuve neanomutevera, Valve inogona kunge ichishanda pane imwe vhezheni yeiyi controller yemavhidhiyo mitambo
LibreOffice 6.2.5 - Yakaziviswa neThe Document Foundation
Iyo Gwaro Foundation yakazivisa iyo nyowani LibreOffice 6.2.5 vhezheni ine inonakidza kugadzirisa uye nhau dzatichazokuudza nezvako
Firefox 68 ichaunza shanduko kubha rekero
Firefox 68 ichaunza shanduko kubha rekero. Kuvhurwa zviri pamutemo kuchaitika muna Chikunguru 9. Unogona kumirira here?
Chrome ikozvino inobvumidza kuwedzera kadhi rechikwereti dhizaini kutenga pamhepo
Google Chrome yakagadziridzwa uye iyo nyowani vhezheni inosanganisira sarudzo iyo ichatibvumidza isu kuchengetedza kadhi rechikwereti data kuti zviite nyore kutenga.
KDE Nharaunda yakaburitsa Krita 4.2.2, nyowani yekuchengetedza kuburitswa iyo inogadzirisa huwandu hwese makumi matanhatu emabhuregi akawanikwa mune yapfuura kuburitsa.
SCUM inoshamisa yekupona yevhidhiyo mutambo ine chaiyo mifananidzo ichauya yeLinux, kunyange pasina zuva rakatarwa parizvino
KStars 3.3.1 iri pano, inosanganisira zvimiro zvitsva zvekuyedza
Iyo KDE Nharaunda yakaburitsa KStars 3.3.1, yekuchengetedza kuburitswa iyo yavakaburitsa kuisa zviyero zvekuyedza.
Mozilla yakaburitsa Firefox 67.0.4 kugadzirisa zvakakomba kuchengetedzeka zvikanganiso. Ichi chiitiko chechipiri chakadai mumasvondo maviri.
Vafambi veCommandos 2 vhidhiyo mutambo weSpanish mavambo vava kufara nekuuya kwezita idzva reGNU / Linux
Vivaldi 2.6 ndiyo vhezheni nyowani yeiyi huru webhu bhurawuza iyo zvino inovhara kushambadzira kunopinza uye inovandudza mashandiro.
Kugadzira mafomu chikamu chakakosha chegadziriro yedhatabhesi. Mune ino posvo tichaona maitiro ekuzviita neLibreOffice Base
Game Muvaki, chimwe chezvishandiso zveGoogle zvekugadzira mitambo ye3D
Game Builder inopa kudhonza uye kudonhedza pasi uye kadhi uye block yakavakirwa mutambo dhizaini ...
LibreOffice wizards inotibatsira nyore kugadzira tafura yedhatabhesi tichishandisa yakatsanangurwa matemplate.
Steam ichagamuchira kudzoreredza kukuru mumufananidzo wayo uye apa iwe unogona kuona kufanoona
Kubva pakuonekwa kwayo, iyo Steam webhu saiti ichagadziriswa zvachose munguva pfupi iri kutevera. Muchikamu chino iwe uchaona dzese nhau.
Iwe unogona ikozvino kurodha yekutanga beta yeLibreOffice 6.3, inotevera inotevera yekuvandudza yeiyi hofisi suite nerutsigiro rwe akasiyana mapuratifomu
Iyo vhezheni yeshanduro yeFirefox webhu bhurawuza ichangobva kuburitswa iyo inomira kunze nekusanganisira iyo yekuteedzera yekutevera kukiya ...
Yese Hondo: Humambo hutatu hwave kuwanikwa kune Linux uye macOS
Feral Inopindirana yazivisa kuburitswa kweHondo Yese: Matatu Humambo hweLinux uye macOS. Inodzokera muna 190 AD uye inotonga yese yeChina.
Iyo nyowani VirtualBox 6.0.8 vhezheni yakatoburitswa kare, kugadzirisa mamwe matambudziko
VirtualBox 6.0.8 idiki diki, asi inogadzirisa dzimwe nyaya hombe kuvandudza ruzivo rweVirtualBox.
Iyi itsva vhezheni yebrowser iri yakagadzikana vhezheni uye maererano nenhau pane mashoma akawedzerwa, pakati pavo inouya nezvimwe sarudzo ...
Euro Rori Simulator 2 ine zvinyorwa zvitsva zvakagadzirira kuburitswa gore rino. Inonzi Gungwa Dema uye ine mamepu matsva eRomania, Bulgaria neTurkey
BattlEye inoshanda neValve nerutsigiro rwayo pane Steam Play
BattlEye inoshanda neValve kutsigira Steam Play / Proton yeiyi Anti-Cheat system inoenderana nemitambo yakawanda yemavhidhiyo.
Tinokuudza izvo Microsoft inoziva nezvedu patinoshandisa Microsoft Office suite. Isu tinonyorawo akanakisa dzimwe nzira.
Android Studio 3.5 beta yakatoburitswa uye uku ndiko kuchinja kwayo
Munguva pfupi yapfuura, kuburitswa kweiyo nyowani beta vhezheni yeApple Studio 3.5 yakaziviswa, unova mugumo webasa mukupa vhezheni ...
Firefox 66.0.4 inosvika kugadzirisa dambudziko nemawedzero
Munguva pfupi yapfuura vagadziri veMozilla vakaburitsa gadziriso yakazara-yeFirefox 66.0.4 uye 60.6.2 ESR ...
Quirinux: iko kugoverwa kwemifananidzo yemifananidzo
Iwe unofarira graphic animation? Uri kufunga zvekugadzira makatuni? Quirinux ndeye GNU / Linux distro nezvose zvinodiwa maturusi
Librem Imwe, iyo nyowani software suite kubva kuPurism, iri pano, isu tichakuudza zvese zvese nekuisirwa kwayo paIOS uye Android
Google yatanga Chrome 74, iyo nyowani vhezheni yedesktop bhurawuza iyo inosanganisira inonakidza nhau senge kuvandudzwa kwepachivande.
Dustwind, chaiyo-nguva yekumanikidza kurwisa vhidhiyo mutambo, zvichibva paUniity 3D uye ine post-apocalyptic nyaya yaunogona kurarama paLinux neSteam Play
Iyo SIgma Dzidziso saga, musori simulation yemavhidhiyo mutambo, inowanikwa muKutanga Kuwana ine zvinyorwa zvitsva neGlobal Cold War.
Capcom munguva pfupi yapfuura yakazivisa kuti vacharonga kuyedzwa kwemavhiki maviri kubva Kubvumbi 23 kusvika Chivabvu 5, vachakwanisa kudhawunirodha Street Fighter V kuburikidza
Kutenderera, mutsva wepikicha-themed mutambo wevhidhiyo uyo une hunhu hunonakidza hwekupa kumhando uye huchauya kuLinux
SuperTuxKart 1.0 ikozvino yave kuwanikwa nemateki matsva uye online mode
Iwe unofarira mitambo yemota here? Uye ungade kutamba navo neshamwari? Iwe uri muhombe: SuperTuxKart 1.0 ikozvino yave kuwanikwa yeLinux.
Kuve nechikumbiro kuronga yedu yehunyanzvi kana yehupenyu hupenyu kunotibvumidza kudzoreredza chikamu chakakura cheizvo zvatinoshandisa pakombuta kana nhare.
Shanduro nyowani yakaburitswa, LibreOffice 6.2.3, iyo itsva kuburitswa yemahara hofisi suite ine anopfuura makumi mapfumbamwe mabuggi akagadziriswa uye kumwe kugadzirisa
Steam Play inogamuchira maviri makuru ekuvandudza, imwe iine yakawanda diki yekuvandudza uye imwe iine mashoma asi akakosha kwazvo kugadzirisa
Two Point Hospital uye Superbug Initiative vanouya kuLinux, mutambo wevhidhiyo wevanoda "hutano" iine nhau dzinonakidza
KDE inozivisa kuburitswa kwe KDE kunyorera 19.04
Iyo KDE nharaunda yakazivisa kuburitswa kwe KDE Kunyorera 19.04. Pamusoro pezvinhu zvitsva, kusimudzira kukuru kwakaitwa.
Imperator: Roma huru zano zita rinouya mwedzi uno
Imperator: Roma, mutambo wevhidhiyo wezano iri remakuru rinosvika mwedzi uno, uye rinozviitirawo chikuva cheLinux.
Crossroads Inn, vhidhiyo mutambo wevatambi wevanoda fungidziro uye nyaya-yakavakirwa nyika, iri kuuya kuLInux
Unoda midhudhudhu, unoda miedzo, kana zvirizvo, mudhorobha mudhudhudhu simulator Urban Trial Nhandare iri yako vhidhiyo mutambo uye ichasvika yeLinux
Haisi yekupedzisira, asi zvinoita sekunge Microsoft Edge ichave pane imwe nguva ivhu paLinux. Pano tinokuudza zvese zvese.
Kupona Mars: Green Planet iri kuuya muQ2 gore rino
Kupona Mars: Green PLanet, nyowani yezvinyorwa zvemusoro weLinux inounza uku kuwedzera kutsva kunosvika muQ2 ye2019.
Mune ino posvo ini ndinokurudzira angu maviri epamoyo maficha ekugadzirisa maunganidzwa. yemabhuku, mumhanzi uye mavhidhiyo. Ose mahara akasununguka sosi.
Mune ino posvo tinoita runyorwa rweyakavhurika sosi yemumwe mutambi mitambo. Ivo anowanikwa eWindows, Linux, uye Mac.
Ksnip chishandiso chekutora screenshots uye mamaki ayo anozove ari mareferenzi. Chii chauri kumirira kuti uzviedze?
Overland: inotyisa yechikwata-yakavakirwa zano vhidhiyo mutambo
Overland inoyevedza squad-based strategy vhidhiyo mutambo unobatanidza kupona mune imwechete zita reLinux
Lutris yakavhurika sosi yemavhidhiyo mutambo wepuratifomu
Kana iwe wakafadzwa neGoogle Stadia, ziva kuti haisiriyo yega yevhidhiyo mutambo wepuratifomu. Iye zvino Lutris anoshanda pane yakavhurwa sosi
DiRT 4: Totenda Feral Inopindirana chiteshi cheLinux chabuda nhasi
DiRT 4, Codemasters 'yekare rally simulation mutambo unouya kuLinux nhasi, ine chiteshi chakagadzirirwa neFeral Interactive
Khoronos ane API nyowani yevanogadzira. Inodaidzwa kuti OpenXR uye inoitirwa chaiyo uye yakawedzerwa chokwadi
Atari VCS ichiri mupenyu uye ichavandudza kune AMD Ryzen
Atari VCS ndiyo Atari mutambo koni inounza isu retro ruzivo rweakanyanya nostalgic uyezve nhau dzenyika yanhasi
GNU nano 4.0 ndiyo itsva vhezheni inounza dzimwe nhau kune uyu muhondo uye anoshanduka wekuraira mutsara mutsara mhariri
Kana iwe uchida kuziva maitiro ekugadzira inogadzirisika kana inozadza PDF, pano isu tinokupa iwe makiyi kuitira kuti iwe ugone kuburitsa iyi mhando yemafomati muLibreOffice
Mune ino chinyorwa tinokurukura matatu akavhurwa sosi mafomu eMac, mutambi, pdf muverengi uye chinyorwa uye kodhi mhariri.
RPCS3: kufambira mberi kutsva mu PlayStation 3 emulator yeLinux
Nhasi taona kufambira mberi kukuru muiyo RPCS3 software, ndokuti, emulator yePlasyStation 3 kana PS3 yeGNU / Linux
Wakafungidzira here kuti chii chingaitika kana tikabatanidza Mario nePortal? Zvakanaka, haufanire kufungidzira: gadza Mari0 uye uzvionere wega.
LibreOffice ichangobva kuzivisa kuburitswa kweLibreOffice 6.2.2. Muchikamu chino tinokuudza zvese nhau dzinouya neshanduro iyi.
LUNA Iyo Shadow Guruva, rimwe remazita asina kujairika anovimbisa kubudirira uye iwo achauya kuLinux. Mutambo wevhidhiyo unobva pane poindi & tinya (dambanemazwi)
Firefox 66: maitiro ekudzokera kune ese mana maitiro uye zvinorevei izvi
Mune ino posvo tinokuratidza maitiro ekudzosera muganho wekuita ku4 muFirefox 66 uye zvatichave tichiita neshanduko diki iyi.
Google Stadia haisi imwe yemitambo chete, ichave shanduko yevatambi uye inokufadza zvakanyanya, kunyangwe vashandisi veLinux
Dzimwe nzira dzekutanga-kuiswa Ubuntu zvishandiso
Iwe haudi iwo maapplication ayo Ubuntu anouya pre-akaisirwa? Mune ino posvo tinokurudzira dzimwe nzira dzakanakisa dzaungashandisa pane.
Madota eOahu akavhurika nyika shooter yeLinux
Kana iwe uchida ma RPG kana vapfura, uye zvakare iyo mitambo yemavhidhiyo ine nyika dzakashama, Aashes kana Oahu iri, uye inogona zvakare kuuya kuLinux ...
Valve inoenderera mberi ichishanda nemaAPIs matsva ekuvandudza chengetedzo uye kuvanzika kwevatambi vayo vanoshandisa Steam uye vanounza Steam Link Kwese
Tropico 6 yatove neyakavanzika zuva rekuburitsa. Musoro wakamirirwa kwenguva refu wehutungamiriri hwewewe "hudzvanyiriri" uchauya nekukurumidza
Kana iwe uchishuva nezano remitambo yemavhidhiyo uye mushandisi weGNU / Linux, isu tine nhau dzakanaka, Humble Bundle nyowani inokuita iwe kunyemwerera nezvipo
Space Denga, tile-yakavakirwa muchadenga yekumisikidza yemavhidhiyo mutambo urikutsvaira iyo crowdfunding chikuva Kickstarter
Iyo nyowani vhezheni yeGoogle Chrome 73 inosvika uye idzi ndidzo nhau dzayo
Iyo nyowani vhezheni yeChannel 73 webhu bhurawuza yakatoburitswa uye senguva dzose Panguva imwechete, iri ...
Izvo zvinoshandiswa zvekugadzira zvekuita-zvinyorwa muLinux zvakasiyana. Mune ino posvo tichatarisa dzimwe dzakanakisa sarudzo dziripo.
Sezvo iwe uchiziva kusvika parizvino, kune dzimwe nzira dzinoverengeka kune Microsoft hofisi suite, pakati payo mamwe e ...
Pane zvirongwa zveWindows zvine online zvinyorwa zvinogona kushandiswa muLinux kubva kubhurawuza. Mune ino posvo tinokuudza vatatu vavo.
Mune ino chinyorwa ini ndinoita runyorwa rwe5 evhurwo sosi zvirongwa izvo mumaonero angu hazvifanire kunge zvichishayikwa pakombuta.
Dzimwe nzira mbiri dzekugadzira mawebhusaiti paLinux.
Linux ine mumabhuku ayo akateedzana evapepeti vane simba ekugadzira mawebhusaiti. Muchikamu chino tinokurukura zviviri zvacho.
HITMAN 2: iyo yekutanga mishoni ikozvino yemahara paLinux pasi peStam Play
HITMAN 2, ikozvino ine yekutanga mishoni yemahara pane Steam Play uye pamwe nemukana wekutamba pane yako GNU / Linux kugovera
DiRT 4: Feral Inopindirana inosimbisa kuburitswa kwayo kweLinux mumwedzi yakati wandei
DiRT 4 iyo yakamirirwa kwenguva refu rally simulation video mutambo watove nezuva rekuburitsa kweLinux, Feral Interactive inozivisa mumwedzi miviri
Chikwata cheMuponesi chiri kunze mangwana kweLinux kuburikidza neSteam
Catness Game Studios inotiunzira mbiri mbiri, kuvhurwa kweThe Saviour's Gang yeLinux zvakanyanya uye kuti ivo vanoramba vachishanda kuunza HIVE kuLinux
Sevha Koch: kuve mukuru weboka kuri mukati mako
Mutambo wevhidhiyo kwauri weboka remabhiza rakakiirwa mukamuri rako rekuvhunduka. Sevha Koch ikozvino yeLinux uye isu tinokuudza zvese
Sigma Dzidziso: zita revasori rinotove riine zuva rekuburitsa
SIgma Theory izita revasori rinosvika riine ongororo dzakanaka, mutambo wevhidhiyo wakaiswa muhondo inotonhora yemberi yePc uye nhare mbozha.
Barotrauma, iri pasi pemvura adventure vhidhiyo mutambo unowanikwa weLinux iyo inokushamisa iwe zvakanyanya kana iwe uchida zvakadzika
Isu tinokuratidza runyorwa rweyakanakisa yemahara uye yakavhurwa sosi yemavhidhiyo mitambo iwe yaunogona kuisa pane yako GNU / Linux distro
GreenWithEnvy, chirongwa chekupfekedza NVIDIA GPUs. Izvo zvauri kutsvaga muLinux kana iwe uri ozero uye urikutsvaga zviri nyore
Kana iwe uri fan weiyo Tycoon-mhando mitambo, nhasi tinopa iyo nyowani yekuvandudza yeTwo Point Chipatara vhidhiyo mutambo weLinux
DUSK iropa reropa FPS zvakajeka rakafuridzirwa nemitambo yeRetro seDambudziko kana Quake. Munhu wekutanga kupfura iyo yeLinux
Kana iwe uri mutambi anofarira ekutsvaga mazita, Windscape iri zita rauchada, uye rinotove riine zuva rekuburitsa.
Nhema Mesa chirongwa chinonakidza, kana iwe usingachizive kana uchida kuziva kufambira mberi kwazvino, isu tinokuzivisa iwe nezve zvese izvi mune ino positi
Apple inoronga hombe online vhidhiyo mutambo chitoro ... ichachinja Linux?
Apple inoronga kugadzira hombe yemavhidhiyo chitoro, seNetflix asi kubva kune yekutamba nyika uye izvi zvinogona kukanganisa mitambo yemavhidhiyo yeLinux
Iwe unofarira kuchengetedzwa kwemakomputa here? Unoda nyika kugura? Zvakanaka, ramba uine ziso pazita iri rinonzi Tech Support: Error Unknown
Google ichangoburitsa iyo nyowani yeiyo Chrome 72 yewebhu browser uye panguva imwechete, yakagadzikana vhezheni inowanikwa ...
Kumuka Kweindasitiri, kana iwe uchida zano uye maindasitiri emitambo yemavhidhiyo, iri ndiro zita rako uye ikozvino rakagadziridzwa kuLinux
Mozilla inovandudza kudzora zvakavanzika muFirefox 65
Firefox inovandudzika nekukwakuka uye nezvikamu, izvozvi neFirefox 65 tichava nematanho ekudzivirira zvakavanzika nekuda kwebasa reMozilla
Isu tinokuudza zhinji dzenhau muFirefox 66, inotevera vhezheni yeMozilla browser, uye tinokuudzawo kwaungaitora.
Kuvhurwa kweInsurgency: Sandstorm inofanirwa kusvika gore rino 2019 papuratifomu yeLinux yekuwedzera imwe huru yekupfura kune iyo runyorwa
PIllars yekusingaperi II, mutambo wevhidhiyo waungade zvakanyanya, ikozvino muBeta yayo inouya nenhau dzinonakidza dzevashandisi veLinux
Inkscape 1.0 inosvika mushure memakore gumi nemashanu ekuvandudza
Inkscape 1.0 yatove pano mune yayo alpha vhezheni uye idzi ndidzo nhau dzatinogona kuwana mune ino grafiti suite
Q2VKPT yakavakirwa pamutambo unozivikanwa Quake 2 kubva 1997, iyi Q2VKPT FPS inoenderana zvizere ne mise ne ray yekutsvaga tekinoroji ...
Iwe unofarira matope, iwe unofarira offroad uye simulators? Mune ino kesi, iwe uchada uyu mutambo wevhidhiyo. Inodaidzwa kuti Ultra-Off Road Simulator 2019 Alaska
Dysmantle izita idzva remusoro rakapihwa iro rine mamwe matrailer uye masampuli anokuvimbisa iwe kuti uchafarira uyu mutambo wevhidhiyo
AMD ine yakawanda nhau ye2019!
AMD inopinda 2019 netsoka yakasimba kwazvo, iko kuvandudzwa kunoenderera kune yayo 3rd Generation Ryzen, yayo 2nd Chizvarwa Radeon RX Vega uye EPYC
Iyo projekiti yakaitwa nevateveri vemutambo wevhidhiyo Half Hupenyu 2 inozivikanwa sePurojekiti Borealis ine itsva yekuvandudza
Volcanoids mutambo unonakidza wekupona wevhidhiyo uyo zvino unogashira hukuru hwevashandisi veLinux
Mitambo yeLinux inonakidza kwazvo inouya muna 2019
Isu tinopa rondedzero ine inonakidza kwazvo mitambo yemavhidhiyo ichauya iri gore idzva 2019 nerutsigiro rweyatinoda GNU Linux distros
Kurumidza!!! GOG iri kupa SOMA yeLinux
Kumhanya !! GOG iri kupa iyo SOMA vhidhiyo mutambo wemahara, asi inongogara kwemaawa mashoma. Wana izvozvi uye tora kopi yako yeKisimusi ino
Iyo Grim Legends: ikozvino unogona kuiwana pane GOG
Kana iwe uri muteveri weiyo The Grim Legends akateedzana, ikozvino unogona kuiwana mune yepamhepo vhidhiyo mutambo chitoro GOG yeLInux
Kana iwe uchiri usina runyorwa rwezvipo zveKisimusi, unogona kuona kwedu kusarudzwa nemakumi gumi emitambo yevhidhiyo yeLinux
Maguta: Skylines akagadziridzwa neDLC nyowani
Maguta: Skylines iguta uye manejimendi manejimendi uye yekufananidza zita ratakatotaura nezvazvo, uye ikozvino rave neDLC maindasitiri.
SC Controller chirongwa chinonakidza cheiyo yakakurumbira Valve gamepad yemitambo yemavhidhiyo iyo inokushamisa iwe, ikozvino ine yekuvandudza
Rocket League ine inogadziridza, iine nhau dzinonakidza, zvakare kune vanoda mutambo uyu wevhidhiyo kubva kuGNU / Linux chikuva
DiRT 4 iri kuuya zviri pamutemo kuLinux nekuda kweFeral Interactive
Kana iwe uchida kuenzanisa uye kumhanya mitambo yemavhidhiyo, pamwe nekuungana, iwe uchave unofarira nezve DIRT 4 painogara paLinux.
Waini 4.0 yatotanga kutora chimiro ...
Iyo Wine chirongwa ichienderera mberi nekusaneta kwayo uye izvozvi chichava waini 4.0 iri kutanga kutora chimiro, iine inonakidza kugadzirisa
Euro Rori Simulator 2 ine kuwedzera kutsva
Beyond Baltic Gungwa ndiko kuwedzera kutsva kunounza akawanda maficha maficha kurori simulator Euro Rori Simulator 2 yeLinux
X4: Nheyo dzisina beta vhezheni yeLinux
X4 Nheyo dzave nekunonoka kukuru sezvo vanogadzira vachisimbisa uye beta yeLinux haizosvika panguva ino
OpenSnitch - Yakanakisa Firewall App yeLinux
Nhasi tichataura zvishoma nezve OpenSnitch inova chiteshi che Little Snitch uye ichi, zvakare, firewall yakagadzirwa chete ...
Neolithic: mutambo wezano wakakurudzirwa neZera reMambo
Kana iwe waifarira Age Of Empires uye iwe une shungu nemitambo yemavhidhiyo yeiyi zano, iwe zvirokwazvo uchafarira zita rekuti Neolithic
Artifact: Valve's muropa Dota 2-yakavakirwa kadhi mutambo unowanikwa kune Linux
Artifact, yakasarudzika, muropa kadhi mutambo wakanangana neValve's inozivikanwa Dota 2 ikozvino yave kuwanikwa kuLinux
Iyo nyowani nyowani yeiyo Yeiyo King vhidhiyo mutambo yasvika ine yemahara zvemukati zvirimo uye nezvimwe zvakawanda zvitsva zvinhu zvatichazokuudza iwe
Iko kune yepamutemo motocross vhidhiyo mutambo ine yakanakisa mifananidzo uye kutamba kwevanoda motorsport uye yakaburitswa yeLinux
Isu tinokuudza zvese zvese nezve LibreOffice 6.2 Beta 1, iine dhizaini nyowani yemushandisi interface inonzi NotebookBar
Gore 2018 rave rinonakidza kwazvo maererano nemitambo inowanikwa kugoverwa kweLinux, kubvira kupihwa kwemazita kubva kwakasiyana ...
Yakazara Hondo: WARHAMMER II, ichauya mwedzi uno uye izvi ndizvo zvinodiwa
Pakati paJune, Feral Inopindirana yakatsamwisa Linux neMac vatambi nekuburitswa kweHondo Yese HondoHAMMER II yemapuratifomu,
Kupona Mars: Race Space ichaburitswa munaNovember 15, 2018 uye uyu mutambo uchavewo nerutsigiro rweGNU / Linux distros
Tropico 6: mutambo wevhidhiyo unosvikawo paLinux musi iwoyo wekutanga
Tropico 6 ndeimwe yemavhidhiyo makuru emavhidhiyo mazita ayo munhu wese anoda, saka, ichauya kuLinux uye ichazviita zuva rimwe chetero kune epuratifomu
Kukosha kwakadzikira uye kupihwa pamitambo yemavhidhiyo yeGNU / Linux yekupemberera Halloween uye kuti iwe unogona kutyisa kubvisa zvakaipa uchinakidzwa ...
Mapfumo anoshandiswa kutenderera pasirese, anodarika mamirioni matatu ekuisirwa pamwedzi
Mapfupa ane hukuru hukuru muLinux, isu tinokuudza iwe ruzivo rweiyo nyowani infographic yakaburitswa neCanonical ichitaura nezve Snaps
Kana iwe uchirangarira, isu tatoita runyorwa rweakanakisa emitambo yemavhidhiyo yeLinux imwe nguva yapfuura muLxA, yaive ...
AQUAMARINE inogona kuuya kuLinux
Aquamarine ndeyekutsvaga uye sainzi yekunyepedzera vhidhiyo mutambo uyo wave paKickstarter uye unogona kusvika paLinux futi.
KURSK: Wekutanga Munhu Akasununguka Nezve Iyo Russian Submarine Chiitiko
Kana iwe uchida mitambo yemavhidhiyo uye iwe uri fan of submarines, iwe uchafarira zita rekuti KURSK, sezvo iri yekutanga-munhu ushingi
Iyo Northgard vhidhiyo mutambo iyo yakaburitswawo yeGNU / Linux distros ikozvino inogamuchira hombe nyowani yemahara yekuvandudza inonzi Ragnarok
FreeOffice 6.1.2 iri pano ine zvinopfuura makumi manomwe zvigadziriso
LibreOffice 6.1.2 iri pano iine 70 bug fixes yakawanikwa nenharaunda nevagadziri
Isina kukurirwa: multiplatform chaiyo-nguva nzira mutambo
Unvanquished ndeye yemahara uye yakavhurika sosi yemavhidhiyo mutambo. Iyo chaiyo-nguva yakawanda multiplayer zano mutambo zvichienderana neyakatanga munhu mutambo ...
Mumwe wevanogadzira AMD vanoshanda paLinux kernel ataura nezveramangwana reiyo AMD Arcturus chirongwa, hatizive kana nemaune
Galaxy in Turmoil mutambo wevhidhiyo wevapfuri wevanoda vanhu vechitatu vanopfura, asi mune ino mahara uye neLinux
Kana iwe uchida madhiraoni, nzvimbo uye zvakare mitambo yemavhidhiyo, Nimbatus hapana mubvunzo mutambo wevhidhiyo weLinux yauri kutsvaga.
Nzira yekuwana sei yazvino vhezheni yePPSSPP
Dzidziso yekuti ungaisa sei yazvino vhezheni yePPSSPP emulator mune yedu GNU / Linuc kugovera, zvisinei nekuparadzira kwatinoshandisa ...
LPlayer irinyore uye yakapepuka mimhanzi inoridza yeSpanish mavambo atinogona kuisa mukugovera kwedu kana yakavakirwa paUbuntu kana Linux Mint ...
Helium Mvura inoyevedza simulator kune vanoda nzvimbo yekunze nerutsigiro rweGNU / Linux uye kuti haufanire kupotsa.
Waini ine shamwari, ndiyo PlayOnLinux chirongwa sekuziva kwako uye ikozvino yakatangwa nezvitsva mumhando yayo 5.0 alpha 1
Chisingaperi Denga rakakura multiplatform nzvimbo yekurwira mutambo
Endless Sky ndeye 2D nzvimbo yekurwira mutambo wakafanana neyekare kubva kuEscape Velocity akateedzana, mumutambo uyu tinofanirwa kuongorora dzimwe nyeredzi masisitimu ...
Diki dhairekitori pane maturusi atinogona kushandisa mune chero kupi kweGnu / Linux kugovera kuverenga magwaro nemifananidzo uye kuendesa kudigital world ...
Joplin ndeye yakavhurwa sosi imwe nzira kune Evernote. Inesimba manotsi mutengi iyo inogona kuyananiswa nemamwe madivayiri pasina kuibhadhara ...
Hondo yeWesnoth ndeimwe yeanonyanyo kufarirwa sosi sosi yemitambo mitambo iwe yaunogona kutamba izvozvi. Izvo zvave zvichangobva ...
Dzidziso: Rekodha skrini mune yako GNU / Linux kugovera
Isu tinopa nhanho-nhanho dzidziso pamwe nesarudzo dzauinadzo muruoko rwako kuti utore skrini paLinux distro yako.
BBS Zvishandiso isoftware inosanganisa akateedzana maturusi kuti ukwanise kubatanidza, kuwiriranisa uye kugadzirisa yako GPS chishandiso kubva kune yako Linux distro.
WTF: Mukomana Mugomba ... Kufambidzana RPG Mutambo paKickstarter
Ehe, ndinofunga wakazviona zvakanaka, Mukomana mutambo wevhidhiyo izvozvi uri pasi pekubhadhara mari paKickstarter inosanganisa zvinhu zvakati wandei, kusanganisira kudanana
Universim rakasiyana uye rinovimbisa vhidhiyo mutambo unowanikwa kubva izvozvi Steam yeWindows, MacOS uye yako GNU Linux distros.
Anogadzira akagadzira script iyo ichatibvumidza isu kushandura emitambo installers kuita flatpak mafomati, kuti kumisikidza kwavo kuve kwepasirese ...
Haisi nguva yekutanga kuti titaure nezveFictorum mune ino LxA blog, iri RPG vhidhiyo mutambo ine yakawanda yekuita uye chimwe chinhu chisingawanzo kuwanikwa mune dzakawanda Fictorum iri RPG vhidhiyo mutambo ine yakawanda yekuita uye inoparadza nharaunda. mauri iwe unogona kunakidzwa uchirwa nezvimwe zvinonakidza zvishongedzo
Tsvaga iwo masere emaneja emahara emahara emaimeri eGnu / Linux atinogona kuyedza nekuisa pane chero kugovera ... wakambovaedza vese here?
Onionshare chirongwa chinotibvumidza kugovana mafaera pamusoro peinternet tisingazive. Chirongwa chinotevera tekinoroji yeiyo TOR Project ...
OpenMW ndeye yemahara uye yakavhurwa sosi yemitambo injini iyo inoitisa zvekare mutambo wevhidhiyo "Morrowind" unozivikanwa mutambo wekutamba mutambo wevhidhiyo, yaive ...
Steam inokutendera iwe kutamba mitambo yeWindows paGnu / Linux
Steam ichaunza nhau dzakanaka dzayo Linux vhezheni. Zvichaitika zvemberi zvichaita kuti mitambo yeWindows ishande pane chero kugoverwa
Kana iwe uchida zvitima, zvirokwazvo iwe unotoziva iyo Railway Empire vhidhiyo mutambo uyo unowanikwa kuisa pane yedu GNU / Linux distros. Pasina Chitima Humambo, iyo chitima simulator yeLinux, ikozvino ine yekuwedzera nyowani inonzi Iyo Great Lakes yevanoda chitima
Chinyorwa chidiki nezveSurf, yakajeka uye diki webhu bhurawuza iyo inotibvumidza isu kufamba nemapeji ewebhu pasina kero bar ...
Iyo Test Pilot yekuwedzera-iyo yatinogona kushandisa muMozilla Firefox
Chinyorwa nezve Test Pilot add-ons, mawedzero atinogona kushandisa kuwedzera mabasa aripo mukati meMozilla Firefox ...
PyCharm IDE yakagadzirirwa kugadzira zvirongwa nemutauro wePython, kunyangwe zvichatibatsirawo kugadzira neimwe mitauro uye zvishandiso ...
Iyo default Calculator maapplication anouya nenzvimbo dzinozivikanwa kwazvo dzedesktop, seGNOME neKDE Plasma, inogona kunge isina kukwana KANA iwe uchitsvaga imwe nzira kune macalculator maapplication anouya nekusarudzika mu distros, Qalculate ndizvo zvawanga uchitsvaga nokuti
Dzidziso diki yekuti ungavandudza sei kana uine yazvino vhezheni yeLibreOffice, iyi LibreOffice 6.1, kungave kuUbuntu kana mune kumwe kugovera
Chokwadi iwe wakanzwa nezve Stage 9, chirongwa chakagadzirwa nevateveri uye chemahara umo chakagadzirirwa kudzoreredza zvakasikwa zvese mukati nekunze. haugone kupotsa nhanho 9
5 mitambo yemitambo yatinogona kuisa pane ingangoita chero kugoverwa kweGnu / Linux
Chidiki gwara pane yakavhurwa sosi zano mitambo yatinogona kurodha pasi nekumisikidza pane chero Gnu / Linux kugovera ...
Valve yatove neiyo nyowani yakagadzika vhezheni yayo Steam mutengi yakagadzirira iyo Microsoft Windows chikuva, MacOS uyezve zvekuparadzira KANA iwe uri fan yemitambo yemavhidhiyo uye shandisa Valve's Steam mutengi pane yako Linux distro, ungakurumidza kukwanisa kunakirwa imwe yemuno 64-bit vhezheni
Valve yakagadzirisa uye ichagadzirisa yayo Steam mutengi kune ese mapuratifomu. Kufambira mberi kunokosha kunozoita mitambo yemavhidhiyo kumhanya nekukurumidza ...
YACReader muchinjikwa-chikuva comic muverengi iyo inotsigira akawanda comic mafaera (CBZ, CBR, ZIP, TAR, RAR uye ARJ) ...
Mozilla Thunderbird 60 ndiyo vhezheni itsva yeaya anozivikanwa eMozilla email mutengi. Iyo nyowani vhezheni inosanganisa nhau huru idzo vazhinji vedu takabvunza ...
Graphical vatengi veGit pane yako GNU / Linux distro
Kana iwe uchitsvaga graphical vatengi kuti vatore Git nekuti iwe uri mumwe wevaya vasingade kushanda kubva kuchiteshi zvakanyanya, saka ichi ndicho chinyorwa icho Kana iwe uchitsvaga graphical vatengi veGit yako yeGNU / Linux kugovera, tarisa kwete kumberi uye pinda kuti uone dzimwe nzira dziripo kuti utungamirire kodhi yako
Textricator: iri nyore data rinotora mafaera ePDF
Textricator chishandiso chinonakidza chaunofanira kuziva. Iyo yakavhurwa sosi uye inoshandiswa kutora data rakaomarara kubva kumagwaro ePDF, isina Textricator chirongwa chekubvisa data rakaomarara kubva kumafaira ePDF nenzira yakapusa uye yakapusa kubva kune yako yaunofarira GNU / Linux distro.
EncryptPad ndeye yemahara uye yakavhurika sosi yekushandisa ye symmetric ciphertext. Ichi chinyorwa chemutauro chinogona zvakare kushandiswa se ...
Alef One inotibvumidza kutamba Marathon 1, Marathon 2 uye Marathon Infinity. Uye zvakare, injini ine kugona kubereka zvekare maitiro, shanduro
Kana iwe uri mudiwa wekare Dreamcast mutambo koni, iwe uchada iyi nhau. Sezvo pane boka revagadziri rinotarisira kuvandudza Kana iwe uchida iyo Dramcast mutambo koni, saka iyo Redream emulator inoenderana neGN / Linux ichakuda iwe kumutsa zvekare mitambo
Xonotic - Mutambi wevazhinji uye muchinjiko-chikuva chakavhurika sosi shooter
Xonotic ndeye yemahara uye yakavhurwa sosi yekutanga munhu shooter vhidhiyo mutambo uyo wakagadziriswa seforogo yeNexuiz, yakanaka kwazvo ...
Mr. Prepper mutambo wevhidhiyo maunogona kutamba kuti uvake yako yepasi pekugara iyo inogona kusvika kuLinux, kuti iwe ugone kunakidzwa nayo.Ungade kutamba mutambo wevhidhiyo kwaunovaka yako yepasi pekugara muLinux, nekuti isu tinopa iwe Mr. Kugadzirira
Kana iwe uchida mabhurawuza ewebhu kune yako terminal, ndiko kuti, zvichibva pane zvinyorwa, zvirokwazvo iwe watoedza imwe imwe nzira yacho. Por unas Browsh ndeyemazuva ano zvinyorwa-based web browser kune yako terminal inotsigira ese magiraidhi uye vhidhiyo kuti usarasikirwe nechero ruzivo
Kukunda PaGungwa Pacific: A Naval RTS Vhidhiyo Game Ichauya NeLinux Tsigiro
Kukunda paGungwa Pacific ibasa remavhidhiyo mutambo wevhudzi izvo zvinokushamisa iwe, hazvisi kuzosiya chero munhu asina hanya nekuda kwemifananidzo yake uye mutambo wemitambo. Kana Kukunda paGungwa Pacific iri ngarava yemavhidhiyo mutambo wezita izvo zvichakushamisa iwe uye izvo zvichave zviripo neLinux rutsigiro gore rino.
0 AD ndeye yemahara uye yakavhurwa sosi yemutambo iyo injini yemutambo "Pyrogenesis" inogoverwa pasi peGPL v2 + rezinesi.
Kana iwe uchitsvaga dzimwe nzira kune maemulators emagetsi anouya nekumira mune yako yaunofarira GNU / Linux distro, Alacritty inogona kunge iri imwe yakanaka. Se Alacritty inogumira emulator yaunogona kushandisa pane yako GNU / Linux kugovera kukurumidza basa rako nekuda kwekumhanya kwayo.
Isa iyo StarCraft II mutambo paLinux nerubatsiro rweWinepak
StarCraft II inyanzvi yesainzi ingano chaiyo-nguva zano mutambo, uyu mutambo wevhidhiyo wakagadziridzwa neBlizzard Varaidzo ...
Mbiru dzekusingaperi II: Deadfire Inozivisa Chikara Chechando Zvakare neLinux
Mbiru dzekusingaperi II: Deadfire izita rauchanyatso kuziva nezvaro kubudirira kukuru. Zvakanaka, kana iwe uri fan weiyi vhidhiyo yemutambo zita, isu tine yakanaka zhizha iri kuuya yepasirose yemitambo yemavhidhiyo paLinux, PIllars dzekusingaperi II: Deadfire yakatove yaziviswa, great news
Tungamira pane chii chinonzi Minecraft, kuti ungaiwana sei uye kuti ungaiisa sei pane chero kugoverwa kweGNU / Linux mahara uye kubhadhara rezinesi rayo.
Overwatch inoisa vatambi muzvikwata zvevatanhatu, nemunhu wega wega achisarudza rimwe remagamba anoverengeka aripo rimwe nerimwe rinofamba.
Fanatical's Strategy Kutengesa inowanikwawo kumitambo yemavhidhiyo yakaburitswa yeGNU / Linux, pamusoro pemazita anowanikwa eMicrosoft Windows Fanatical's Strategic Sale iri zvakare kuwanikwa kwemavhidhiyo mazita emitambo anowanikwa eGNU / Linux, kuwedzera paWindows uye macOS.
Chinyorwa chidiki nezve emulators emahara atinogona kurodha mahara uye ayo anoshandira kugoverwa kwedu kweGnu / Linux ...
Nepo vazhinji vachiri vasina chokwadi nezve kuvhurwa uye kubudirira kweiyo itsva Atari VCS, vamwe vari kuitarisira. Haisi Atari VCS haisati iri pano asi iri kutopa zvakawanda zvekutaura nezvazvo. Mushure mekunonoka uye kusahadzika ikozvino kwouya zvigadziriso ...
Diki dhairekitori maitiro ekuisa Dropbox pane chero GNU / Linux kugovera uye maitiro ekuita iri gore rekuchengetedza basa mune iyo faira maneja.
Tungamira pane izvo VirtualBox iri, maitiro ekuisa iyi software paLinux / GNU uye kuti ungagadzira sei muchina wekumisikidza kumisikidza kumwe kugovera.
Chinyorwa chidiki nezve zvina zvinowedzerwa zveMozilla Firefox zvine chekuita nekuvanzika uye nemabatiro avangaita isu kuchengetedza data redu kubva kune malware ...
Iyo nyowani vhezheni yeUnity 2018.2 injini yemifananidzo iri pano, yakatakurwa nenhau nekuvandudzwa kwemitambo yemavhidhiyo paLinux, Windows neMac ...
Wallabag, yakavhurwa sosi imwe nzira kune Pocket
Wallabag ndeye yemahara kunyorera kusevha kuverenga kweanotevera, yemahara uye yemahara imwe nzira kune yakakurumbira Pocket iyo vazhinji vanoshandisa ...
Dzidziso diki yemitambo yekutamba mitambo yePlaystation pakombuta yedu neGnu / Linux. Chidzidzo chakareruka uye chakashandurwa pamatanho ese ...
Pathfinder: Kingmaker, inotyisa-kutamba mutambo wevhidhiyo neLinux rutsigiro
Inoyevedza kutamba-kutamba vhidhiyo mutambo neLinux rutsigiro. Inonzi Pathfinder: Kingmaker uye ndeyechokwadi kutaurwa nezvayo.
Tiri kutaura nezveLyX, yakazvimirira izwi processor inogadzirisa LaTeX uye kuti tinogona kuishandisa senzira yakanaka kune LibreOffice Munyori ...
Cube 2: Sauerbraten yakanakisa yekutanga munhu shooter mutambo
Cube 2: Sauerbraten ndeye yemahara, yakavhurwa sosi yekutanga munhu shooter vhidhiyo mutambo uye ndiye anotsiva Cube FPS, Cube 2 ndiye anotsiva kuCube.
Chinyorwa chidiki chekuti ungaramba sei uchiziva nezve World Cup usingabvunze asina kuvimbika kana kushambadzira mawebhusaiti ...
Shanduro nyowani yeShotwell yaonekwa mubazi risina kugadzikana, vhezheni inounza kuvandudzwa kukuru senge kuzivikanwa kwechiso kwemifananidzo ...
Gnu / Linux yakagadziridzwa nemumwe mutambo. Turok: Dinosaur Hunter mutambo wekare uyo wave kuwanikwa kuGnu / Linux kugoverwa ...
Hide or Die an epic horror video game pamwe neinogona Linux rutsigiro
Hide kana Kufa epic inotyisa vhidhiyo yemutambo zita rinounza rutsigiro rweLinux, kuti tikwanise kunakidzwa naro pane yedu inofarira GNU / Linux distros.
Cryptomator: chengetedza uye encrypt yako mafaera kubva kune yako gore masevhisi
Cryptomator ndeye yemahara, yekuyambuka-chikuva, yakavhurwa sosi software chishandiso pasi peGPLv3, ichipa mutengi-parutivi kunyorera
Isu tese tinoziva mabhenefiti eVulkan, graphical API iyo inouya kubva ku AMD Matle kodhi uye iyo isu tese tinogona kunakidzwa nayo. Mavericks mutambo wevhidhiyo
Winepak Chii chinoitika kana tikasanganisa Waini, mitambo yemavhidhiyo uye Flatpak?
Kana isu tikabatanidza yemuno vhidhiyo mitambo yeMicrosoft Windows neiyo Wine chirongwa uye neUniversal Flatpak mapakeji ... mhedzisiro yacho inonzwika zvakanaka, zvinoita kunge Winepak
Diki Bug: Yekushanya Vhidhiyo Mutambo weLinux Kuuya Ino Zhizha
Little Bug, mutambo wevhidhiyo uyo unopa chinonakidza chikamu cheapuratifomu kumatunhu eGNU / Linux. Unoshinga kusangana naye here?
Mars koloni kutevedzera uye kupona mutambo wevhidhiyo Kupona Mars kwawana nyowani yebhonasi yezvirongedzo.
Iko kuvandudza kweMozilla Firefox kwave kurarama kupfuura nakare kose. Munguva pfupi yapfuura, iyo Test Pilot chishandiso chakakurumbira, chishandiso chinotibatsira ku ...
Isu tinotaura nezveTypora, yakanakisa zvinyorwa zvemavara nerutsigiro rweMarkdown neMathJax
Dzidziso diki yekuti ungadzivirire sei pdf, iri nyore gwara nezvirongwa uye nzira dzekudzivirira chero pdf faira muGnu / Linux ...
Kukunda PaGungwa Pacific: chairo mutambo wevhidhiyo nezvehondo dzegungwa ...
Kana iwe uchida zvengarava adventures, hondo uye ngarava, Kukunda PaGungwa Pacific iri vhidhiyo mutambo wevatambi wauchada zvakakwana, zvakare inowanika munguva pfupi yeLinux
Parkitect Beta 7: kugadzirisa mashandiro uye dzimwe nhau
Kana iwe uchida mitambo yemavhidhiyo uye mapaki emitambo, unogona kufarira kubatanidza zvese zvinovaraidza muParkitect, mutambo wevhidhiyo wekutarisira aya mapaki ane maficha matsva mune ino Beta 7 vhezheni.
Gwara diki pane Unetbootin. Chirongwa chinotibatsira kugadzira pendrive yemabhodhoro uye nekuisa chero kugoverwa kweGnu / Linux kubva pendrive pasina kushandisa chero isina dhisiki dhisiki ...
Dzidziso yekudzima nhoroondo yewebhusaiti yedu, iri nyore uye yakapusa basa asi zvakare zvakakosha kuti kubhurawuza Internet hachisi chinhu chinonetesa ...
Rudder: Maitiro ekugadzirisa manejimendi uye software yekuongorora
Rudder ndeye yemahara uye yakavhurika sosi mhinduro yakanangana nekugadzirisa manejimendi uye kuongorora kuti ibatsire kugadzirisa magadzirirwo emasisitimu muhombe IT zvivakwa munzira inodzorwa uye yakachengeteka.
Iridium Browser ndeimwe yedzimwe nzira dzakagadzirwa kuchengetedza hunhu hwako pamhepo. Iyo Iridium browser inoenderana nekodhi hwaro hweChromium inova yemahara uye yakavhurika sosi browser. Iridium ine zvese zvakagadziriswa zvinogadziridza zvakavanzika zvemushandisi
ProjectLibre yakavhurika sosi yeprojeki manejimendi software, inomhanya papuratifomu yeJava, ichiibvumira kumhanya pane akasiyana masisitimu anoshanda. Parizvino ndiyo yakavhurwa sosi imwe nzira yeMicrosoft Project.